आमाको जन्मदिनमा छोराद्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर – नेपाली संगसार
नेपाली संगसार calendar_today १७ फाल्गुन २०७७, 1:57 pm
दाङ । घोराही निवासी नरेन्द्र पुनले आफ्नो आमाको जन्मदिनको अवसर पारेर निशुल्क स्वास्थ्य शिबिर सन्चालन गर्नु भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ ढोडेनीमा बस्दै आएका पुन परिवारले यो चाँजोपाँजो मिलाएका थिए ।
सोमबारबाट ८० वर्षमा लाग्नु भएकी आफ्नी आफ्नाको जन्मदिनको अवसरमा पारेर छोराबुहारीहरु सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा जुटेका हुन् ।
निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन हुने थाहा पाएका स्थानीय नागरिक बिहानैदेखि आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन निकै हौसिएका थिए । लामो समयसम्म कोरोनाका कारण स्वास्थ्य जाँच गराउन नपाएका तथा आफ्नै घरआँगनमा निशुल्क विशेषज्ञ सेवा लिन पाउने भएपछि खुशी हुनु स्वाभाविकै थियो ।
जेष्ठ नागरिक, महिला तथा केही युवाहरुको बिहानैदेखि भीड थियो । सोमबारबाट ८० वर्षमा लाग्नु भएकी आफ्नी आफ्नाको जन्मदिनको अवसरमा पारेर छोराबुहारीहरु सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा जुटेका हुन् ।
आमाको जन्मदिनलाई स्मरणीय बनाउन र समाजमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउन स्थानीय युवा तथा समाजसेवी नरेन्द्र पुन, श्रीमति वर्षा पुन, उहाँका भाइ डा. बसन्त पुन, बुहारी सनिता गुरुङ पुनलगायत पुन परिवार र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी गरी १४ जनाको टोली निशुल्क उपचार तथा परामर्शमा खटिएको हो ।
विक्रम सम्वत् १०९७ फागुन १७ गते जन्मनु भएको आमा दिलमाया पुनको ८० औ जन्मदिनमा यसरी स्वास्थ्य शिविरमा स्थानीय नागरिकले निशुल्व स्वास्थ्य सेवा लिन पाए । कोरोनाले अधिकांशलाई स्वास्थ्य र सरसफाईमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने सिकाए पनि अहिलेको बदलिँदो जीवनशैलीका कारण कतिपयमा नसर्ने खालका दीर्घ रोगले सताउँदै लगेको बेला उपचार खर्च महंगो हुँदा बेलैमा उपचार गर्न नपाएकाहरुले निशुल्क सेवा लिन पाएकोमा दंग देखिन्थे ।
उनीहरुलाई आवश्यक परामर्शसहित औषधी पनि निशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । शिविरमा मुटु रोग, दम, सुगर, थाईराईड, भित्री रोग, किड्नी, मुटुको ईसिजी, युरिक एसिडलगायतको जाँच तथा सेवा परामर्श निशुल्क गरिएको हो ।
वरिष्ठ जनरल फिजिसियन डा. बसन्त पुन मगर, डा. सनिता पुन र डा. जमिलु रहमानले मुटु, सुगर, थाइराइड, पेटसम्बन्धी रोग, भित्री रोगआदि निशुल्क जाँच तथा परामर्श गरिएको थियो भने, ओम पोलिक्लिनिकले निशुल्क सुगर जाँच किड्नी जाँच, युरिक एसिडको जाँच तथा मुटुको इसिजी सेवा दिईएको थियो ।
यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, रक्तसंचार सेवा, नेपाल औषधी बिक्री वितरक प्रतिनिधि संघ, घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले औषधी सहयोग गरेको थियो । आफ्नो बुवा अनरेरी क्याप्टेन स्वर्गीय मनबहादुर पुनको प्रेरणाबाट आफुहरु सामाजिक काममा विगतदेखि खटिँदै आएको बताएँदै छोरा नरेन्द्र पुनले यस अघि बुवाको ८८ औ जन्मदिनको अवसरमा शिविर गरिएको स्मरण गर्नुभयो ।
गाउँघरमा आर्थिक अभावमा उपचार गर्न नपाएका, स्वास्थ्य उपचार बेलाबेलामा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नपाएकाहरु लागि यस्ता खालका शिविर निकै फलदायी हुने विश्वासका साथ आमाको जन्मदिनमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छोरा डा. बसन्त पुनले बताउनुभयो । केही नियमित औषधी सेवनकर्ता उपचारमा आएको भेटिए पनि नयाँ रोगी पनि उपचारका क्रममा फेला परेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, सो क्षेत्रमा पहिलो पटक गरिएको रक्तदान कार्यक्रमले निकै टेवा पुगेको उहाँको भनाई छ । रक्तदान पटक पटक गरेमा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने र अरुको जीवन पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने भावना जगाउन निकै फलदायी भएको बताउनुभयो । रक्तदान कार्यक्रममा ११ जना स्थानीयले सहभागीता जनाएका थिए ।
यसैबीच, आफ्ना ३ भाइ छोरा बुहारी १ छोरीले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा गरेको अभियानले धेरैलाई स्वास्थ्य लाभ मिल्ने भएपछि दिलमाया पुन मगरको मुहारमा बेग्लै खुशी देखिन्थ्यो । आफ्नो जन्मदिनलाई छोरा बुहारीले साामाजिक सेवा गरेर मनाएकोमा सेवा लिन आएका सबैलाई धन्यवादसहित स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो ।
शिविरको उद्घाटन घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले गर्नुभएको थियो । शिविर उद्घाटन गर्दै वडा अध्यक्ष डाँगीले आमाको जन्मदिनको अवसरमा स्वास्थ्य सचेतनाको अभियानलाई पृथक रुपमा मनाएको भन्दै पुन परिवारलाई धन्यवाद दिँदै एक सच्चा नागरिकले सामाजिक उत्तरदायित्व यसरी नै बहन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
शिविरको उद्घाटन ८०औं जन्मदिन मनाउनुभएकी दिलमाया पुन मगरको अध्यक्षतामा भएको थियो । पुन परिवारमा समाजमा यस्ता खालका विभिन्न सामाजिक काम गर्दै आएको छ ।